दूधको मूल्य बढाउन केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले त्यसलाई साथ दिएका छन् । दुई वर्षदेखि दूधको मूल्य नबढेको तर दाना बढेका कारण किसानले लागत उठाउन नपाएको उनीहरूको दलिल छ ।
संगतिपूर्ण बाटो लिन र व्यवहार देखाउन नसक्दा अहिले नेपाली राजनीति बजार हल्लाबाट विषाक्त भइरहेको छ । गएको एक साता मैले टीभी च्यानल, एफएम रोडियो, अनलाइन, छापालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चार माध्यममा यिनै हल्ला केन्द्रित कुराकानी गरेँ ।
राजधानीमा केही समययता विद्यालयहरू आकस्मिक रूपमा बन्द हुने गरेका छन् । कारण खोज्दा सुनिन्छ, ‘नेपाल बन्द रे !’ लाखौं विद्यार्थीको पठन–पाठन ठप्प गराउने विद्यालय आफै हुन् वा अरु कोही ? असुरक्षा भए सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय किन बोल्दैनन् ?
राजीव सिन्हा, सन्तोष नेपाल
कोसी नदी तिब्बत र नेपालको उच्च भूभाग हुँदै भारतको विहारको समथर भागबाट गंगा नदीमा मिसिन्छ । यो विश्वकै सबैभन्दा गतिशील नदीमध्ये एक हो । विगत २०० वर्षमा भारतमा यो नदी ११३ किमि पश्चिमतिर सरिसकेको छ । कोसी यसरी बारम्बार सरिरहँदा यसको नयाँ बाटोमा पर्ने भूभाग र संरचनाहरूलाई पनि धेरै क्षति पुर्‍याएको छ ।
दक्षिण एसियाको राजनीतिक इतिहासका विद्यार्थीहरू कश्मीरको कथा व्यथासित सायदै अनभिज्ञ छन् ! हिन्दु राजा हरिसिंहको मुस्लिमबहुल राज्य १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछि चेपुवामा परेको थियो । द्विपक्षीय दाबी रहेको कश्मीरमै द्वन्द्वको स्थिति चर्कने आभास गर्दै हिन्दु महाराजले ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गरी ससर्त स्वतन्त्र भारतलाई कश्मीर सुम्पेका थिए ।
जनै पूर्णिमाको तिथि हिन्दु धर्मावलम्बीका लागिमात्र नभई बौद्धमार्गी तामाङहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हरेक वर्ष यही पूर्णिमा (गोनेङ्ह्या) का दिन तामाङहरूमाझ ‘छो कार’ (सेतो ताल) को नामले परिचित रसुवाको गोसाइँकुण्डमा तामाङहरू ‘छो कार छोपा’ गर्छन्, जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ— सेतो तालमा गरिने पूजा ।